आफ्नै मृत्युको समाचार पढेपछि…. « News24 : Premium News Channel
आफ्नै मृत्युको समाचार पढेपछि….
सिन्धुपाल्चोक ठोकर्पा–३ पहरी बस्तीका ३५ वर्षीय यमबहादुर पहरी केही दिनदेखि चिन्ति छन् । उनको मोबाइलमा एकोहोरो फोनको घन्टी बजिरहन्छ र एउटै प्रश्नले उनी हैरान हुन्छन् । उनी सबैलाई एउटै जवाफ दिदाँदिँदा थाकिसके, ‘म जिउँदै छु, मलाई केही भएको छैन ।’
जिउँदो मान्छेलाई मरेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि कस्तो महसुस होला ? हो यस्तै भएको छ अहिले पहरीलाई । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।